“Kala-xadaynta gobollada waa in loo raaco Distoorka iyo Xuduudihii 1960” Muuse Biixi Cabdi | Somaliland.Org
October 26, 2008	Socdaalka Wasiirka Daakhiliga iyo cabashada dadka deegaanka
Ma cadda in sababta xukuumaddu ciidankaas halkaas ugu dirtay tahay muran-xuduuddeedka ka taagan. Hase yeeshee, waxa uu murankaasi taagnaa sannadihii u dambeeyay, isla markaana waqtiyadii doorashooyinka ayuu dhowr jeer soo noqnoqotay, haatana waxay u muuqataa inay soo cusboonaysiisay hawsha Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha Somaliland. Qaramada Midoobay oo ka hadashay cafis M/weyne Rayaale u fidiyay Maxaabiis
Nairobi (Xinhua/Ogaal)- Ururka Qaramada Midoobay ayaa shalay markii u horraysay ka hadlay aragtidooda ku wajahan Maxaabiis uu dhawaan cafis u fidiyay Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, kuwaas oo laga sii daayay Xabsiyo kala duwan oo ku kala yaala Magaalooyinka Dalka.
Sidaanu ka soo xiganay Shabakadda Wararka ee Xinhua oo laga leeyahay dalka Shiinaha, Qaramada Midoobay ayaa tallaabada M/weyne Rayaale qaaday soo dhawaysay, gaar ahaan sii-daynta 104 Maxbuus oo dhalinyar ah oo da’doodu u dhaxayso 15 ilaa 18-jir, kuwaas oo ka mid ahaa in ka badan 800 Maxbuus oo lagu sii daayay cafis-Madaxweyne. “Tallaabooyinkani waxay sugi karaan caddaaladda iyo nidaamka sharci ee Carruurta iyo dhismaha wacyigelin ballaadhan oo ku aaddan Xuquuqda Caruurta.” Sidaa waxa War-Murtiyeed uu ka soo saaray Magaalada Nairobi ku yidhi Wakiilka Hay’adda UNICEF u qaabilsan Somalia iyo Somaliland Christian Balslev-Olesen. Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Sidoo kale waxay sugi doontaa baahida loo qabo ilaalinta Caruurta ee sharciga.”
Sida uu War-Saxaafadeedkan ku sheegay Madaxa UNICEF ee Somalia iyo Somaliland ka hor intii aan Xabsiyada laga sii dayn da’yartan oo uu sheegay in lagu xidhay fal-dembiyeedyo ay ka mid yihiin Waalid-caasinimo, laba maalmood oo la-talin iyo wax-sheegmo ah ayay ku qaateen Xabsiyadii ay ku jireen. “Sii dayntooda ka hor, adeegyada di-u-habaynta caruurta ayay heleen, kaas oo ay kaheleen Mashruuca Cadaaladda Caruurta ee ay wada wadaan Hay’adaha UNICEF iyo UNDP.” Ayaa lagu yidhi War-Saxaafadeedkaas.
Madaxa Mashruuca UNDP ee ROLS Alejandro aya sidoo kale ka hadlay Sharciga cusub ee Caruurta Somaliland. “Sharciga cusub ee Caruurtu waa mid ka muhiimad badan Shuruucda kale oo dhan, kaas oo la xidhiidha Caruurta Sharciga khilaafta. Waxaanu rejaynaynaa in si aad ah loo hirgeliyo, si looga hortego xadhigga Caruurta.” Ayuu yidhi Mr. Alejandro.
Salaasadii toddobaadkii hore ayay ahayd markii Xabsiyada dalka laga sii daayay Maxaabiis kala duwan, isla markaana loo haystay dembiyo kala duwan oo aan ahayn Dil ka dib markii uu M/weyne Rayaale cafis u fidiyay. Geba-gebada Maalintii koobaad ee Diiwaan-gelinta Gobolka Awdal iyo Casharada cusub ee laga bartay Borama (Ogaal) – Diiwaan-gelinta codbixiyayaasha doorashooyinka ayaa shalay si rasmi ah uga bilaabantay Gobolka Awdal. Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, md Axmed Yuusuf Yaasiin, Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Md Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro), Gudoomiyayaasha labada Xisbi ee Mucaaradka ah UCID iyo KULMIYE Md Axmed Maxamed Maxamuud (Siilanyo) iyo md, Faysal Cali Waraabe iyo sidoo kale Wasiiro ka tisan Xukuumada ayaa kala qayb-galay dadweynaha reer Awdal bilow-ga hawshaasi shalay subixii. Shacbiga Gobolkaasi ayaa u muuqday kuwo si weyn ugu diyaar ahaa, Islamarkaana safaf dhaadheer u galay Goobaha diiwaan-gelinta oo inta badan hawsha sidii Komishanku u qorsheeyay u bilaabay, marka laga reebo dhawr goobood oo cilado farsamo ku yimaadeen, Islamarkaana la saxay sida uu sheegay Gudoomiye ku xigeenka Gudiga doorashooyinku Cali Max’ed Cabdalle Biikolo.
Gudoomiyaha Gudiga diiwaan-gelinta Doorashooyinka Qaranka Ismaaciil Muuse Nuur ayaa tilmaamay sidoo kale inay jiraan cilado farsamo iyo caqabado ka hor-yimi bilawga Hawsha diiwaangilnta.
Mudane Ismaaciil oo shalay Saxaafada la hadlay waxa uu ku eedeeyay Ciidamada Amaanka inay ka gaabiyeen inay si fiican u gutaan waajibaadkii saaraa. Waxa sidoo kale uu eedayn u jeediyay mudane Ismaaciil Xisbiyada oo uu dusha u saaray masuuliyada car-qalado aan ahayn kuwo farsamo oo hadheeyay Goobaha diiwaan-gelinta Boorama qaarkood. “Xisbiyadu Nidaamdarro ayay horseedeen , waxana taasi ka sii daran oo si xun u waxyeeleeyenaya diiwaangalinta Borama ka socota nidaambeeleedyo”. Sidaas ayuu yidhi Ismaaciil Muuse.
Hase ahaatee, Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka Maxamed Ismaaciil ayaa Ogaal u sheegay in warbixintii ugu danbeysay ee ay ka haleen hawsha Gobolka Awdal u cadaynayso guud ahaan marka la eego hawsha Diiwaan-gelinta inay dar-dar wanaagsan ku bilaabantay, Islamarkaana ay Boqolkiiba sagaashan ku qanacsan-yihiin sida ay u socoto.
Waxa jira, is fahmi waa dhowr goobood ahaa oo dadweynihii iska xaadiriyay iyo hawl-wadeenada Komishanka ee diiwaan-gelinta dhexmaray, sida Xarunta Abuqays ee magaalada Borama, oo la xidhay ka dib markii hawl-wadeenadu ay ogaadeen in Kombuyuutarka ay sitaan aanu ahayn kii loogu tala-galay. “Waxa keenay, Khaladkaasi oo dhawr meelood ah, Koonbuyuutaradii ayaa isku badalmay, oo Konbuyuutarkastaaba Goobta loogu tala—galay in la geeyo ayuunbuu fahamsan-yahay oo la geliyay. Goobaha arrintaasi ka soo baxeena deg-deg ayaa loo saxay, dhibaato kalena ma jirto, Dadkuna waa inay is diiwaan-geliyaan oo ka faa’iidaystaan fursada” Sidaa waxa yidhi Gudoomiyaha Gudiga Doorashooyinka oo aanu wax ka weydiinay ciladan cusub oo aan ka mid ahayn casharadii laga bartay Gobolka Saaxil. Wariye lagu magacaabo Cali Ismaaciil oo magaalada Saylac uga soo waramay shabakada wararka Intarnetka ee Lughaya-news ayaa sheegay sidoo kale in goobta Saylac A oo shalay subixii ay iska diiwaan galiyeen Wasiirka hidaha iyo dalxiiska, Badhasaabka Gobolka Salal iyo Maayarka Saylac ay soo food-saartay cilad dhinaca Kombiyuuterka ahi, taasoo hawl-wadeenada ka shaqaynayay ay ku sifeeyeen in Kumbiyuuratka goobtu xawilan-yahay isla markaana ay xogtiisu taalo goob kale. Sidoo Kale Wariye Cali Jibriil waxa uu sheegay in goobaha magaalooyinka Caashacado, Xirsi Bow iyo Darayadheere xidhmeen ka dib markii ay qaarkood sida uu sheegay dad isku fara-saareen, in kasta oo aanu sifayn wariyuhu gacan ka hadalkaasi sababta keentay. Afar Goobood oo Komishanku xisaabiyay Degmada Baki ayaa wararku sheegayaan inay shaqaaqo hadhaysay sida Deegaanka Xamarta Oogeed, taasoo keentay in la xidho Goobahaasi.
Gudoomiyaha Golaha Wakiillada Md, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro) ayaa sheegay in Komishanku ka faa’iidaystay marka la eego waaya-arag-nimadii laga kasbaday Ciladihii farsamo ee ka hor-yimi diiwaan-gelinta Gobolka Saaxil oo lagu bilaabay in kasta oo ay jiraan ayuu yidhi cilado aan hore loo soo marin oo ku soo baxay . Islamarkaana waxa uu sheegay inay hawshu si fiican u bilaabantay. “Waxaanu u nimi Gobolka inaanu ka qayb-galo furitaanka diiwaan-gelinta Gobolka Awdal, Gobol kastana sidaa ayaanu uga qayb-geli doonaa” Sidaas ayuu yidhi Gudoomiyaha Golaha Wakiillada oo aanu weydiinay ujeedada ugu weyn ee Madaxda Gobolkaa ku sugani u tageen halkaasi. Gudoomiyaha KULMIYE Md, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ka qayb-galay furitaanka hawshaasi oo lagu qabtay Garoonka Kubada Kolay-ga Boorama ayaa ugu baaqay shacbiga reer Awdal iyo Salal inay u soo baxaan diiwaan-gelinta oo uu sheegay inay tahay dan qaran. Wararka waxay intaa ku darayaan in magaalada Saylac oo kale uu gaadhay Gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo shalay soo maray degaano kala duwan oo ka tirsan degmadaasi, isaga oo dadka ku guubaabinayay inay is diiwaan-geliyaan. Waxaana uu warbaahinta u sheegay Gudoomiyaha UCID in deegaanadaasi marka la eego xaalada nololeed ay adagtahay, balse dadku si weyn ugu soo baxay diiwaan-gelinta.
Wararka ka imanaya dhinaca magaalada Cali-xaydh ayaa iyana waxa ay sheegayaan in ay goobaheedu si fiican u shaqaynayeen. Sidoo kale dhanka Magaalada Boon iyo dageenada hoos yimaada waxa ay wararku sheegayaan in ay si fiican uga socotay hawshu.
Degmada Dila ayaa iyana Goobaheedu marka la soo ururiyo sida warku sheegay si habsami ah hawsha-diiwaan-gelintu uga bilaaban-tay una soo xidhantay.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md Axmed Yuusuf Yaasiin oo ka hadlay telefishanka qaranka ayaa ugu baaqay Komishanka inay ku amraan shaqaalaha goobaha in diiwaan gelinta la wado ilaa sagaalka habeenimo maadama dadku yahay reer miyi iyo beeralay ay ku adag tahay inay gelinka hore soo haleelaan is diiwaan gelinta taas oo ah ayuu yidhi dhibaatooyinkii lagala kulmay Gobolka Saaxil. Hase ahaatee, shalay waxay hawsha diiwaan-gelinta la soo gaba-gabeeyay 6-dii makhrib-nimo sidii qorshuhu ahaa guud ahaan.
Dhinaca kale, Dadka ka soo jeeda Gobolada Awdal iyo Salal ee ku sugan Dalalka Jaarka la ah Somaliland ayaa wararku sheegayaan inay si xoog-leh uga soo talaabayeen Xuduudaha, si ay isu diiwaan-geliyaan.
Marka la soo ururiyo, Wararka bilowga Diiwaan-gelinta ee ka bilaabantay Gobolka Awdal oo ah Gobolkii labaad ayaa waxay tilmaamayaan in marka laga reebo muranka dhinaca xuduuda ee hadheeyay Goobaha qaar iyo ciladaha farsamo oo dabcan qalabka dartii iman kara mar kasta, ay si ka xowli-badan uga bilaabantay marka loo eego qarba-qarbadii Gobolka Saaxil Jabuuti: Maanta iyo wada-hadallada mar kale u furmaya dhinacyada Siyaasadda Somalia
Jabuuti (Reuters/Ogaal)- Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Somalia Ahmedou Ould-Abdalla oo shalay gaadhay Magaalada Jabuuti, ayaa ka hadlay wada-hadallo maanta uga bilaabmaya dhinacyada isku haya Siyaasadda Somalia ee Maamulka TFG iyo Isbahaysiga Dib-u-xoraynta Dalka Jabuuti, kuwaas oo la rejaynayo in ay heshiis taam ah ku gaadhaan, isla markaana ku kala saxeexdaan Magaalada Jabuuti. Ergayga gaarka ah oo u waramay Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa sheegay in ay Qaramada Midoobay ahaan u arkaan in horumar laga gaadhay wada-hadallada iyo isu-soo dhawaynta labada dhinac, isla markaana ay tahay wax lagu tilmaamo mucjiso. “Waxaanu heynaa iyagoo (Labada dhinac) wax wada saxiixaya, u wada safraya Stockholm-Sweden, wada jir ula kulmaya Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Seminaar ku wada qaadanaya Koofur Afrika. Taasina waxay iigu muuqataa aniga mid mucjiso ah”ayuu yidhi Ould-Abdallah. Waxaanu sheegay in ay Qaramada Midoobay ka go’an tahay in ay qaadaan tallaabo kasta oo guul loogaga gaadhayo wada-hadallada u dhaxeeya dhinacyada Siyaasadda Somalia, isla markaana lagu xallin karo qalalaasaha ka taagan Somalia.
Mr. Ahmedou Ould-Abdallah waxa uu sheegay in uu guul iyo is-af-garad ka rejaynayo Shirka iyo wada-hadallada maanta la filayo inay Magaalada Jabuuti uga bilaabmaan Maamulka TFG ee Somalia iyo Isbahaysiga Dib-u-xoraynta. Isla markaana haddii ay ka soo baxaan midho-dhal aayo leh ay tahay wax lagu farxo. “Aad ayaan ugu faraxsanaan doonnaa horumar kasta oo ka soo baxa Wada hadallada Jibouti. Haddii ay jirto Dowlad midnimo Qaran, halkaas ama meel kale, dadka Soomaaliyeed ayaa ugu horeyn ku farxi doona, Annaga sidoo kale aad ayaan ugu farxi doonnaa” ayuu yidhi Ahmedou.
Dhinaca kale, waxa uu Ergaygu ka hadlay Budhcad-Badeedda Gacanka Cadmeed ee Soomaalida ah, isaga oo sheegay in ay waqti ku qaadanayso wax-ka-qabashadoodu. “Waqti bay qaadaneysaa in Budhcad-Badeedka wax laga qabto, laakin taasi macnaheedu ma ahan in ay Budhcad-Badeedku ay xor yihiin, isla markaana ay geystaan dembiyo ku-talagal ah.” Ayuu yidhi Ergaygu. Mudaharaad ka dhacay Muqdisho & Wararkii u dambeeyay Muqdisho (Ogaal/W.Wararka)- Bannaan-bax lagu dalbanayay furitaanka goobaha Waxbarashada ee Muqdisho ayaa shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho. Iyada oo isla shalay uu halkaa Dagaal ku dhex maray Ciidamada Maamulka TFG iyo kooxaha ka horjeeda ee Dagaalka kula jira.
Bannan-baxan oo ka dhacay Degmada Hodan, isla markaana ay ka qaybgaleen arday ay Waxbarasho la’aan kala soo deristay Dagaallada ka dhaca Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xaafadaha Taleex iyo KM4 iyo sidoo kale Waalidiin, ayaa ahaa mid ay ku codsanayeen in goobaha ay ku yaallaan Xarumahooda waxbarashada ay noqdaan kuwo ka caaggan Ciidamada iyo dagaallada. Waalidiinta Banaanbaxan ka qeybgalay ayaa sheegay in ay Caruurtooda oo isugu jira kuwo Jaamacado dhiganayay iyo kuwo Dugsiyada Hoose/Dhexe iyo Sare dhiganayay ay la soo deristay Waxbarasho la’aan, sidaas darteedna ay dhinacyada ku dagaallama Xaafadaha Hodan ay ka codsanayaan in ay dagaallada ka joojiyaan.
Ka hor intii aanu Bannan-baxani ka bilaabmin Degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho, waxa halkaa Dagaal ku dhex maray Ciidamada Maamulka TFG ee Somalia oo ay weheliyaan Ciidamada AMISOM iyo Kooxaha Dagaalka kala horjeeda. Dagaallo kale oo hore uga dhacay Degmadaas ayaa la sheegay inuu sii xoojiyay xidhitaanka goobaha Waxbarashada ee Degmada Hodan. Iyaga oo ay halkaa ku geeriyoodeen qaar ka mid ah ardaydii halkaa wax ka baranaysay iyo Macallimoontoodii, siday Wararku sheegayaan.
Goobahan Wax-barasho ayaa la sheegay in ay wax ka baranayeen 27,200 oo arday, kuwaas oo hadda la sheegay in ay ku kala filiqsan yihiin Magaalada Muqdisho. Allay-baday: Toban Meheradood ku shuf-beelay dab ka kacay Kaalin shidaal Allaybaday (Ogaal) – Kaalin shidaal oo ku taala badhtamaha Magaalada Allay-baday ayaa galinkii danbe ee shalay dab ka kacay, Islamarkaana waxa uu dabkaasi baabi’iyay ilaa toban meheradood. Dabkan ayaa sida ay faafisay shabakada wararka Intarnetka ee Waaheen waxa uu dhashay ka dib markii shidaal lagu shubayey kaalintaasi uu dab-qabsaday. Kaasoo ay ku shufbeeleen maherado u badnaa Dukaamo iyo Bakhaaro ka ag-dhawaa oo ilaa tobaneeyo ahi kuwaasoo maca alaabtii hoos taalay shufbeeshay in kasta oo aanu warku qiimaha ay ku fadhiyaan iyo inta ay leekaan karto mid-na xusin.
Dabka gubay guryahaasi ayaa ka dhashay kaalin nooca Bakhaarada ah ee foostooyinka lagu kaydiyo oo badhtamaha Magaalada ku taal oo booyadi markaa shidaal ku shubaysay, taasoo dabku ka dhashay shubistii ay foostooyinka ku shubaysay. Sidoo kalana dadwaynaha Magaalada Allaybaday ayaa isku dayey inay la tacaalaan oo ay bakhtiiyaan dabkaasi balse marba marka ka danbaysa ayey baaxada ololka dabku sii kacayey, waxaanu dabkii ku fiday sakadii kaalintu ku taalay oo ahayd goob ay meheraduhu ku badan yihiin, taasina waxay sababtay awoodii dabku inay ka itaal roonaato dadweynihii. Buuhoodle: “Arrimo badan ayaa noo sahlay in gobolku ka mid noqdo Somaliland”
Wasiir Ku-xigeenka Hawlaha Guud
Buuhoodle (Ogaal)- Wasiir ku xigeenka Hawlaha Guud iyo Guriyaynta Somaliland Md. Cabdirisaaq Cawil Bacaluul ayaa sheegay in Gobolka Buuhoodle uu si buuxda ugu soo wareegay maamulka Somaliland, isla markaana waxa ka xog-waramay safar uu ku tegay Buuhoodle iyo degaamo hoos-yimaada. Wasiir ku-xigeenka oo ku sheegay socdaalkiisa mid shaqo, ayaa sida lagu shaaciyay shabakadda BoramaNews waxa uu dedaal ugu jiray sidii gobolkaasi ugu xidhmi lahaa guud ahaanba gobollada dalka ee kale. Sidoo kale, Mr Bacaluul waxa uu sheegay inay dadweynaha gobolkaa ku wacyigelinayeen inay is-diiwaangeliyaan oo ka qaybqaataan doorashooyinka dhawaan dalka ka dhici doona. Waxaanu intaa ku daray in waqtigan ay magaalada Buuhoodle ka duwan tahay sidii ay ahaan jirtay oo aanay laba calan ka taagnayn iyo laba maamul toona, balse maamulka Somaliland keli ku yahay. “Arrimo badan baa noo sahlay in gobolku ka mid noqdo Somaliland; Ta koowaad waa hanashada Somaliland hanatay gobolka Sool, maamulna u samaysay iyo; Ta labaad oo ah in maamulkii Puntland oo fadhiidka ahaa uu noqday wax aanay waxba ka jirin,” ayuu yidhi Wasiir Cabdirisaaq Cawil Bacaluul. Waaxaanu sheegay in xilligan shir uga socdo Buuhoodle cuqaasha, wax-garadka iyo odayaasha, kaas oo uu ku andacooday inaanay xukuumad ahaan farogelin ku samayn, balse ujeedadiisu tahay sidii reer Buuhoodle wax ula-qaybsan lahaayeen Somaliland. “Runtii wax lug ah kuma lihin shirkaas, iyagaa isku yimi oo ka tashanaya aayaha dhulkooda, iyagoo doonaya inay wax qabsadaan oo wax la qabsadaan dadka reer Somaliland.”
Waxa kale oo uu sheegay in dadweynaha gobolkaasi diyaar u yihiin diiwaangelinta iyo inay ka qaybgalaan doorashooyinka soo socda. Waxaanu xusay inuu sii joogi doono Buuhoodle ilaa inta ay ka dhamaystirayaan maamul-fidinta gobolka Buuhoodle. Isla markaana wasiirku waxa uu kulamo sida la sheegay la yeeshay cuqaasha, wax-garadka, dhalinayarada iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha gobolkaas, inkasta oo aanu warku kala cadayn xilliga ay shabakadu la xidhiidhay iyo weliba habka uu warkan wasiirku ku siiyay. Qiimaha Salliida caalamka oo gaadhay halkii ugu hoosaysay
Columbus, Ohio (W. Wararka/Ogaal)- Qiimaha Salliida qaydhin ayaa shalay dhulka sii galay, waxaana lagu tilmaamay qiime-dhacaas kii ugu hooseeyay ee sannadkan soo mara, xataa iyada oo Ururka Salliidda Dunida ee OPEC ay ku dhawaaqeen inay si balaadhan u jarayaan wax-soo-saarkooda si ay isugu dayaan in la hakiyo qiime-dhaca salliida ku socday mudooyinkii ugu dambeeyay.
Qiimaha salliida qaydhin ayaa la sheegay inuu gaadhayo 56% marka loo eego halkii ugu saraysay ee uu gaadhay bishii July, waxaana la sheegay in qiimaha ka dhacay foostadiiba uu yahay inka badan $41 Doollar qiimihii uu ahaa bishii la soo dhaafay. Kulan ay isugu yimaadeen shalay magaalada xarunta u ah dalka Austria ee Vienna ayay ururka OPEC kaga dhawaaqeen inay hoos u dhigayaan wax-soo-saarka salliidda oo ay ka jarayaan 1.5 milyan oo foosto maalintiiba. Maalgashadayaasha caalamiga ah ayaa dareen yar ku eegaya isku-dayada uu ururka OPEC ku doonayo inuu ku xadido wax-soo-saarkiisa, isla markaana arrintaas bedelkeeda waxay awooda saarayaan dalabyada ccaalamiga ah ee dhaqaalaha, maadaama suuqyadii caalamka wax-qaybsigii maalgashiyadu aad hoos ugu dhaceen Qaaradaha Aasiya, Yurub iyo weliba Maraykanka. Iyada oo dhaqaale burbur balaadhan uu guud ahaanba caalamku ku jiro ayaa arrintan soo food-saartay dalalka salliidda soo saaraa waxa lagu tilmaamay mid saamayno kala duwan ku yeelan karta caalamka guud ahaan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu aadka u soo korayo sida Shiinaha iyo Hindiya oo la sheegay inay u baahan yihiin sallied fara badan. Hase ahaatee, Maraykanka ayaa iyagu soo dhaweeyay dhawaaqa ka yimi Ururka Salliida Adduunka ee OPEC. Khartuum: Guriga Diblomaasi Itoobiyaana oo xoog lagu galay iyo xidhiidhka labada dal oo sii xumaanaya
Khartoum (Sudan Tribune/Ogaal)- Ciidamada Amaanka Suudaan ayaa la sheegay inay ku soo xoomeen guriga uu Khartuum ka degen yahay Diblomaasi Itoobiyaan ahi, isla markaana waxay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ahaa dadkii la joogay, sidaana waxa shalay faafiyay Wargeyska Sudan Tribune ee ka soo baxa magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan.
Sida laga soo xigtay Wargeyska Af-carabiga ee Al-Hayat oo ka soo baxa magaalada London, warar aan la xaqiijinin oo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in dhacdaddaasi ay toddobaadkan ka dhacday guri ay Khartuum ku leeyihiin xubnaha arrimaha Millatariga u qaabilsan safaaradda Itoobiyaanku ku leeyahay dalka Suudaan. Hase yeeshee, masuuliyiin ciidamada amaanka ka tirsan ayaa cadeeyay tallaabooyinkooda ay kula kaceen guriggaas, iyaga oo markaa ku andacooday in qaar ka mid ahaa dadkii gurigaa ku sugnaa ay xad-gudubyo ka galeen qawaaniinta Suudaan, maadaama khamri loo soo waariday. Diblomaasiyiinta wararka la sheegay in laga helay ayaa sheegaya in arrimahan ugu dambeeyay ee isku-xigxigay ay saamayn balaadhan ku leeyihiin xidhiidhka Suudaan iyo Itoobiya oo la sheegay inuu sii xumaanayo. Wararku waxay intaa ku darayaan in maamulka caasimada Khartoum ay ka cadhaysan yihiin maamulka Addis Ababa oo sida lagu eedaynayo hub ku caawinaya dawladda koonfurta Suudaan. Horaantii bishana waxa soo baxay warar sheegayay in diyaarad millatariga Itoobiyaanku leeyihiin ay ka degtay garoonka diyaaraddaha magaalada Juba, taasoo la sheegay inay hub u siday Jabhadda Xoraynta Dadka Suudaan ee loo soo gaabiyo (SPLA).
Wasiirka Arrimaha Dibadda Suudaan ayaa dabadeed la sheegay inuu u yeedhay Ambaassadoorka Itoobiya u fadhiya Khartuum si uu ugala hadlo arrimo la xidhiidhay markabka hubka siday ee Ukrain-ga ah ee weli ku afduuban xeebaha Soomaaliya. Balse, dawladda Itoobiyaanku waxay sheegtay in hubkii diyaaradu siday ahaa bandhig millatari. Sidoo kale, waxay wararku sheegeen in dawladda Itoobiyaanku aanay raali ka ahayn xidhiidhka dhaw ee Erretariya oo cadowgooda koowaad ahi ay la leedahay dalka Suudaan. Waxaana intaa dheer in wararka qaar sheegayaan in maamulka Addis Ababa ay ku eedaynayaan Suudaan inay ka dambeeyaan oo ay taageeraan dagaalyahanka Oromada iyo kooxaha Dagaalyahanka Islaamiyiinta Soomaaliya. Bishii July ee la soo dhaafayna Ciidamada Suudaan waxay Ciidamada Itoobiyaanka ku eedeeyeen inay weerar ku qaadeen saldhig millatari oo ay leeyihiin, kuna yaala gudaha xuduudka ay la wadaagaan Itoobiya, halkaas oo ay sheegeen inay weerarkaa Itoobiyaanku ku laayeen 19 askartooda ka mid ah. This entry was posted in News. Bookmark the permalink.	Comments are closed.